घर / 2017 / अक्टोबर
महिना: अक्टोबर 2017
प्रकाशित अक्टोबर 31, 2017 अक्टोबर 31, 2017
रेडियो टोन RT4
भेट्ने RT4 नेटवर्क नेटवर्क रेडियोमा अत्याधुनिक राज्य।
पूर्ण विवरणहरू पढ्नुहोस्
प्रकाशित अक्टोबर 30, 2017 अक्टोबर 30, 2017
रेडियो टोन RT4 भिडियो समीक्षा
नेटवर्क एन्ड्रोइड रेडियो RT4 को यो भिडियो समीक्षा हेर्नुहोस्।
म यो कहाँ किन्न सक्छु?
प्रकाशित अक्टोबर 29, 2017 अक्टोबर 29, 2017
के तपाइँमा एन्टेना प्रतिबन्ध छ?
त्यसो भए, तपाईं एक शौकिया रेडियो उत्साही हुनुहुन्छ। तपाईं भर्खर नयाँ अपार्टमेन्टमा सर्नुभयो र यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि तपाईंको छिमेकीहरूले तपाईंलाई छतमा एन्टेना स्थापना गर्न दिदैनन्।
ठिक छ, ठीक छ। तपाइँ अझै नयाँ घरसँग उत्साहित हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाइँ केवल तपाइँको पुरानो एफएम ह्यान्डहेल्डमा टाँस्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। तपाईं विन्डोको नजिक जानुहोस् र क्षेत्र मा सबै रिपीटरहरू हिट गर्न को लागी शुरू गर्नुहोस्। तपाईले एउटा पनि हिट गर्नुहुन्न। पहिले नै हताश, तपाईं विन्डो बाहिर आफ्नो हात छडी, पूर्ण शक्ति सेट, र अझै, केहि छैन। तपाईले सायद प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ।
असमान नगर्नुहोस्। तिमी एक्लो छैनौं। यो विश्व भर मा अन्य धेरै hams को भयो। यदि तपाइँ वास्तवमै क्युएसओ भएको अन्य हम्सको साथमा प्रविधिको बारेमा छलफलको लागि हाम्राडियोलाई मनपराउँनुहुन्छ भने, तपाइँ अझै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ IRN - अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क.
यो प्रणाली संसारभर मा धेरै हम्राडियो आरएफ च्यानलहरु संग जोडिएको छ र तपाइँ समुदाय संग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई केवल वाइफाइ जडानको आवश्यक छ, वा / जी / G जी डाटा योजना र तपाईं जडित हुनुहुन्छ। नोट गर्नुहोस् कि तपाईंलाई वैध हामराडियो लाइसेन्स चाहिन्छ यदि तपाईं आईआरएनमा प्रसारण गर्न चाहानुहुन्छ भने।
यो रमाईलो छ। यो अझै पनि हम्राडियो हो! (जबसम्म तपाईं यो सोच्नुहुन्न कि हाम्रैडियो मात्र सीडब्ल्यू हो - अरूलाई के बताउन नदिनुहोस् तपाईको के हो र के हाम्रैडियो हो। आफैंको लागि सोच्नुहोस्। शौकको आनन्द लिनुहोस्! हामी अब anymore० को दशकमा होइनौं)
ह्यामराडियो तपाईको चाहानुहुन्छ!
प्रकाशित अक्टोबर 28, 2017 नोभेम्बर 12, 2017
एक नि: शुल्क Inrico T298s 3G / Wifi + UHF रेडियो (400-470 मेगाहर्ट्ज) जीत
यो नि: शुल्क UHF नेटवर्क ट्रान्सीभर जित्ने ठूलो मौका हो - उत्तम विक्रेता Inrico T298s 3G / Wifi + UHF रेडियो (-400००--470० मेगाहर्ट्ज)
तपाईले केहि पनि किन्नु पर्दैन। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको हाम्रो न्यूजलेटरमा तपाईको कलगइनको साथ दर्ता गर्नु हो र तपाईले swe१/१२/२०१ on मा स्वीपस्टेकमा नि: शुल्क प्रविष्टि पाउनुहुनेछ।
हामी विजेतालाई इ-मेल मार्फत सम्पर्क राख्दछौं त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हाम्रो ई-मेल ठेगाना तपाईंको सम्पर्कहरूमा थप्नुभयो ताकि यो स्पाम फोल्डरमा समाप्त हुँदैन। हाम्रो इ-मेल ठेगाना हो hamradio@megahertz.shop
एकचोटि तपाईंले दर्ता गर्नुभएपछि तपाईंको अनौंठो कोड पाइन्छ र तपाईंले आफ्नो साथीहरूसँग मात्र साझेदारी गर्नु पर्छ। हेर्नुहोस् कसरी तपाइँ तपाइँको संभावना बढाउन सक्नुहुन्छ:
प्रत्येक सन्दर्भित आगन्तुक +१ प्रविष्टि
लिंक्डइन +१ प्रविष्टिमा साझेदारी गर्नुहोस्
Pinterest +१ प्रविष्टिमा साझेदारी गर्नुहोस्
प्रकाशित अक्टोबर 26, 2017 अक्टोबर 26, 2017
एक रेडियोटोन RT4 को प्रयोग गरेर आफ्नो नेटवर्क रेडियोमा GPS ट्र्याकिंग थप्नुहोस्
रेडियो-टोन RT4 एक इम्बेडेड सफ्टवेयर समाधानको साथ आउँदछ जुन तपाईंको सहकर्मी, साथीहरू वा अन्य ह्याम्सको ठाँउ जाँच गर्न अनुमति दिन्छ।
या त तपाई यसलाई Zello जस्तै अनुप्रयोगहरु संग काम को लागी प्रयोग गर्नुहोस्, वा IRN संग hamradio शौक को लागी, रेडियोटोन सबैभन्दा उन्नत नेटवर्क ह्यान्डहेल्ड रेडियो हो। यसले आधुनिक मोटोरोला जस्तो देखिन्छ। यसको ब्याट्री सदाको लागि रहन्छ र स्पिकरले आश्चर्यजनक चर्को र क्रिस्टल स्पष्ट ध्वनि प्रदान गर्दछ।
RT4 PTT स्मार्टफोन एक इजाजतपत्र मुक्त उत्पादन हो र यो पारम्परिक रेडियो विपरीत कुनै दूरी सीमितता छ। यो 3G जी, G जी र वाइफाइ नेटवर्कका लागि उपयुक्त छ, अनलाइन पोजिशनिंग सफ्टवेयर सहित उच्च सटीकता जीपीएस एन्टेनाको साथ। इन्स्ट्यान्ट स्थान बिभिन्न प्लेटफार्महरू (पीसी र स्मार्टफोनहरू) द्वारा ट्र्याक गर्न सकिन्छ। मालिकले स्थान इतिहास र कुनै पनि फोनको गति ट्र्याक गर्न सक्दछ; कुनै पनि फोनको लागि अलार्म र अधिसूचनाहरू हुनेछन् यदि geofence बाहिर छ भने, नेटवर्क मालिक द्वारा सेट।
खरीद जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ
प्रकाशित अक्टोबर 26, 2017
एक रेल मा हम्राडियो
हामी सबैलाई हाम्राडियो समुदायसँग कुरा गर्न मन पर्छ, हैन? के हुन्छ यदि तपाईं अन्य ह्याम्ससँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ, तपाईंको ह्यान्डहेल्डको साथ यात्रा गर्दा र स्थानीय रिपीटरको पहुँच बिना?
एक क्रस कन्ट्री कल्पना गर्नुहोस्, लामो र ट्रेन कव्सिओ राम्रो र आरामदायक भरिएको लामो सवारी।
अर्को दिन, रेडबुल एयर रेस पोर्चुगलको ओपोर्टो आए। म लिस्बनमा बस्दा, दौड हेर्न ट्रेनमा k०० किलोमिटर यात्रा गर्ने निर्णय गरें। मैले लिएको मेरो ह्यान्डहेल्ड नेटवर्क रेडियो म संग। यो पारंपरिक ह्यान्डहेल्ड ट्रान्सीभर जस्तो देखिन्छ। तर यो छैन। यो एक PTT बटनको साथ सेलफोन हो। TeamSpeak3संग स्थापित र मा ट्यून गरियो IRN - अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क, म मेरो मनपर्ने हामराडियो कुराकानी समूह: The गिल्ड QSO च्यानल संग जोडिएको थियो। म तिमीलाई भन्दछु ... कस्तो राम्रो सवारी। ठिक छ, मैले स्वीकार गर्नै पर्छ, म एक राम्रो क्रस-कन्ट्री ट्रेन सवारी मन पराउँछु। म भर्खरै बसें, आराम गरी र मेरो विन्डोबाट हेराईहरूको मजा लिनुभयो, मेरा ह्याम साथीहरूसँग कुरा गरिरहँदा। भाग्यवस, यस ट्रेनले नि: शुल्क Wi-Fi जडान प्रस्ताव गर्‍यो, तर मैले मेरो dat जी डाटाप्लान पनि प्रयोग गर्न सक्थें।
मलाई थाहा छ यो पारम्परिक हम्राडियोबाट टाढा छ, तर चीजहरू विकसित हुँदैछन्। यदि तपाईंको लागि यो हाम्राडियो होइन, किनकि तपाईं भ्वाइस यातायातका लागि वाणिज्य नेटवर्क प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई आदर गर्दछु, तर ... जसरी मैले यसलाई देख्छु? एक हाम्राडियो ओएम, आरामदायक रेल सवारीमा, प्यारा रेडियो जस्तो हन्डहेल्डको साथ, अन्य हम्सहरूसँग समुद्रको अर्को तर्फ कुरा गर्दै। मेरो लागि, यो बाहेक केहि छैन "hamradioing"।
तपाईंको सवारीको मजा लिनुहोस्!
प्रकाशित अक्टोबर 16, 2017 अक्टोबर 16, 2017
R&inder रेडियोमा कसरी AT&T 4G / LTE सक्रिय गर्ने
त्यहाँ एक विशेष प्रक्रिया छ 4G LTE सेवा तपाईंको RFinder मा AT&T वायरलेसको साथ सक्रिय गर्न:
लाई एक इ-मेल पठाउनुहोस् jr5788@att.com संग W2CYK@rfinder.net CC मा।
SUBJECT: M1 LTE गर्न कन्भर्ट
OS जोस, कृपया मेरो M1 LTE लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मेरो आईएमआईआई हो:
मेरो फोन नम्बर:
मेरो AT&T पिन IS:
सहयोगको लागि धन्यवाद!
तपाईंको नाम र तपाईंको सम्पर्क नम्बर »
त्यसो भए, सक्रियताको ठाउँमा नभएसम्म तपाईंले केहि दिनहरू कुर्नु आवश्यक पर्दछ। तपाईंको RFinder LTE क्षमताहरूको मजा लिनुहोस्।
अन्य देशहरूमा त्यस्तो प्रक्रिया आवश्यक छैन।
प्रकाशित अक्टोबर 16, 2017 मार्च 18, 2019
IRN - अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क
IRN के हो?
आईआरएन (अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेटवर्क) Teamspeak3(TS3) को प्रयोग गरेर VoIP / RoIP प्रणाली हो जुन रेडियो प्रयोगकर्ताहरूलाई TX / RX गर्न अनुमति दिन्छ। iएनजी आरएफ दुनिया भर मा विभिन्न उपकरणहरु (मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, कम्प्यूटर आदि) को उपयोग नि: शुल्क।
प्रणालीले प्रयोगकर्ताहरूलाई पोइन्ट पोइन्ट वा निजी समूह क्यूएसओको लागि निजी कुराकानीहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईं IRN प्रणालीमा तपाईंको लिंक, पुनरावर्तक वा हब थप्न चाहानुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् सेक्सन सेक्शन प्रयोग गर्नुहोस्।
TS3 एप्पल, एन्ड्रोइड, पीसी, म्याक र लिनक्समा उपलब्ध छ। IRN सँग यसको आफ्नै निजी सर्भर एकैचोटि सयौं जडानहरू अनुमति दिईएको छ। त्यहाँ बिभिन्न वार्तालापहरू (च्यानलहरू) भित्र छन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण RX / TX क्षमताहरू बिभिन्न रेडियो नेटवर्कहरू र संसारभरका प्रणालीहरू मार्फत अनुमति दिन्छ।
यसलाई थप चाखलाग्दो बनाउनको लागि, तपाईं PTT सक्षम गरिएको स्मार्टफोनहरू तल सूचीबद्ध जस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै हम्सले PTT- सक्षम फोनहरू प्रयोग गर्दछ, त्यसैले तिनीहरू IRN समान शैलीको साथ प्रयोग गर्न सक्दछन् जुन उनीहरूले ह्यान्डहेल्ड रेडियो प्रयोग गर्दछन्। आईआरएन टक समूहहरू जीपीआरएस / 3G जी / G जी / वाइफाइ वा आरएफ (रिप्रेटरहरूमा निर्भर गर्दै) मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस्: यो प्रणाली दुबै लाइसेन्स * र लाइसेन्स हम्स दुबैका लागि प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छ। प्रत्यक्ष हेम-रेडियो रिपीटरहरू केवल लाइसेन्स हम्स द्वारा पहुँच गर्न सकिन्छ.
* गैर-इजाजतपत्र प्राप्त प्रयोगकर्ताहरूले आईआरएनको सदस्यता प्राप्त गर्न आवेदन दिनै पर्छ उनीहरूको लागि कलिंग उत्पन्न गर्नका लागि (चिन्ता नलिनुहोस्, यो पनि नि: शुल्क हो)।
निम्न उपकरणहरूसँग समर्पित PTT बटन छ जुन तपाईंको अनुभवलाई अझ राम्रो बनाउँदछ जब IRN प्रयोग गर्दा।
एक डेमो भिडियो हेर्नुहोस्
प्रत्यक्ष QSO एक मोबाइल रेडियो को साथ आईआरएन को उपयोग कर - Inrico TM-7
प्रकाशित अक्टोबर 15, 2017 अक्टोबर 27, 2017
जर्मनी मा Zello - एक महान समुदाय
कनाल जेल्लो फ Fun्कमा हामी एक महान रेडियो समुदाय हो।
यहाँ, शौक रेडियो अपरेटरहरू, पूर्व र सक्रिय रेडियो एमेचर्स, प्रबन्धकहरू, गृहिनीहरू, ट्याक्सी ड्राइभरहरू र ट्रक चालकहरू, सुरक्षा र विद्यार्थीहरू भेला हुन्छन्। सबैजना सामेल हुन सक्छन् र नहरमा स्वागत छन।
नि: शुल्क अनुप्रयोग जेल्लोले कुनै पनि पीसी, एन्ड्रोइड, ब्ल्याकबेरी वा आईओएसमा काम गर्दछ।
ज़ेलोले मोबाइल फोनलाई वाकी-टाकीमा रूपान्तरण गर्‍यो। त्यो हो, भ्वाइस सन्देशहरू प्रत्यक्ष साझेदारहरूमा कल साझेदारहरूमा पुन: उत्पादन गरिन्छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको पुस-टु-टक-बटन बटन थिच्नु हो र तपाईंलाई साथीहरूले सुन्नेछन्।
जेलोफunk्कमा हामी दैनिक चीजहरूको बारेमा कुरा गर्छौं र एक अर्कासँग रमाइलो गर्छौं। हामी मजाक गर्दै छौं, हाँस्दै छौं र संसारभरि जेल्लो रेडियो साथीहरू सम्म पुग्न अवसरको मजा लिदै छौं। हामी गम्भीर मुद्दाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौं र आवश्यक परेको बेला हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्दछौं।
निको द्वारा zello.info
रेडियो टोन RT4 - 4G वाईफाई Zello ट्रान्सीवर
पक्का F25 - 4G वाईफाई ज़ेलो ट्रान्ससीभर
प्रकाशित अक्टोबर 15, 2017 अक्टोबर 15, 2017
जेलो गाडी हाँक्दै गर्दा
कार मा Zello रेडियो
ड्राइभिंगको बेला सेल प्रयोग गर्न र यसलाई सुरक्षित बनाउन, एक ब्लुटुथ PTT बटन मोबाइल फोन प्रयोग गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सचित्र उदाहरणमा, एक सामसु Galaxy ग्यालक्सी S7 XCS स्रोत बाट एक "ऑटो ब्लूटूथ मीडिया बटन" को साथ प्रयोग भएको थियो।
दुबै उपकरणहरू सजिलैसँग मिलाउन सकिन्छ र निर्दोष कार्य गर्दछ।
प्ले / पज कुञ्जीलाई प्रेषित कुञ्जीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र अपरेट गर्दछ (सेटिंगमा निर्भर गर्दै) PTT मा साथै टगल मोडमा।
साथै, भोल्युम बटनहरू कार्यमा छन् र मोबाइल भोल्युमको समायोजनलाई अनुमति दिन्छ।
समावेश गरिएका सामानहरूले स्टीयरिंग व्हीलमा प्रत्यक्ष संलग्न (क्लिप द्वारा) अनुमती दिन्छ। PTT बटन थिच्दा हातले स्टेरि wheel् छोड्नुपर्दैन।
वैकल्पिक रूपमा, मेडिआब्टन पनि उपयुक्त स्थानमा चिपकाउन सकिन्छ (आपूर्ति गरिएको चिपलेट टेप प्रयोग गरेर)।
पहिलो परीक्षणहरू पछि, मेडियाबुटनसँग मोबाइल फोनको संयोजन र गाडी मिडिया सेन्टरमा एकीकरण (रिसीभरको मात्रा बढाउन) मोबाइल सेल अपरेशनका लागि उपयोगी समाधान हो!
लेखक: निकु बाट http://zello.info